ခံတှငျးနံ့ဆိုးတှကေို ငါးမိနဈအတှငျး ဖယျရှားနိုငျမယျ့ အလှယျဆုံးနညျးလမျး (5) ခု
HomeKnowledgeခံတှငျးနံ့ဆိုးတှကေို ငါးမိနဈအတှငျး ဖယျရှားနိုငျမယျ့ အလှယျဆုံးနညျးလမျး (5) ခု
ကိနျးဂဏနျးတှအေရ ကမ်ဘာ့လူဦးရေ 5% ကနေ 60% ဟာ အမြိုးမြိုးသော အကွောငျးတှကွေောငျ့ ခံတှငျးနံ့ ဆိုးခွငျးကို နစေ့ဉျကွုံတှနေ့ရေပါတယျ။ ခံတှငျးကို နစေ့ဉျ ဂရုစိုကျရငျတောငျ၊ ကွကျသှနျဖွူတှေ အမြားကွီး မစားရငျတောငျ တဈခါတရံမှာ ခံတှငျးက အနံ့ဆိုးနတေတျ ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့မှာ ပီကမေရှိတဲ့ အခါ၊ အရေးပျေါ လိုအပျတဲ့ အခါ ခံတှငျးနံ့ ဆိုးပြောကျအောငျ လုပျလို့ရမယျ့ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိပါတယျ။
ဘာ့ကွောငျ့ ခံတှငျးနံ့ ဆိုးတာလဲ။
အဓိကကတော့ ခံတှငျးကို သခြောဂရုမစိုကျတဲ့ အခါ ဘကျတီးရီးယားတှေ ပေါကျဖှားလာပွီး ခံတှငျးနံ့ဆိုးရခွငျး ဖွဈပါတယျ။ ခံတှငျးနံ့ မဆိုးဖို့အတှကျ ခံတှငျးသနျ့ရှငျးရေး၊ လြှာသနျ့ရှငျးရေး၊ သှားသနျ့ရှငျးရေးတို့ကို အထူး ဂရုစိုကျပွီး ပွုလုပျဖို့ လိုပါတယျနျော။ ခံတှငျးနံ့ ဆိုးရတဲ့အကွောငျးအရငျးအမြိုးမြိုးကတော့
1. ဆာလဖာကွှယျဝစှာပါဝငျတဲ့ အစားအစာမြားကို အမြားအပွားစားခွငျး
2. ဆေးလိပျသောကျခွငျးနှငျ့ အရကျသောကျခွငျး
5. စိတျဖိစီးမှုမြားခွငျးနှငျ့ စိုးရိမျသောကမြားခွငျး
6. ခံတှငျးတှငျ အနာဖွဈခွငျး
ခံတှငျးနံ့ဆိုးတာကို ခကျြခငျြးဖယျရှားဖို့အတှကျ သှားတိုကျဆေးတှေ၊ သှားတိုကျတံတှေ မလိုအပျပါဘူး။ အနံ့တှကေို ဖယျရှားနိုငျမယျ့ ထိရောကျတဲ့ နညျးလမျးလေးတှေ ရှိပါတယျ။
ခံတှငျးထဲက ဘကျတီးရီးယားတှကေ မကောငျးတဲ့ အနံ့တှကေို ထုတျလှတျပေးပွီး တံတှေးက အနံ့ဆိုးတှေ မဖွဈလာအောငျ ကာကှယျပေးပါတယျ။ ခန်ဓါကိုယျမှာ ရဓေါတျပွညျ့လလေေ၊ ခံတှငျးနံ့ဆိုးတာ သကျသာလလေပေါပဲ။ ခံတှငျးက ခွောကျနတေယျဆိုရငျ ရတေဈဖနျခှကျကို သောကျလိုကျပါ။
2. ပူဒီနာ၊ တရုတျနံနံ၊ ပငျစိမျးတို့လို ဆေးဖကျဝငျအပငျတှကေို ဝါးစားပါ။
ပါတီရောကျနတေယျ ဆိုရငျ ပူဒီနာလို ဆေးဖကျဝငျ အရှကျတှကေို ဝါးစားလိုကျပါ။ အဲဒီလိုအရှကျတှကေ သှားတှကေို ခကျြခငျြး သနျ့ရှငျးသှားစမှောတော့ မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အနံ့အသကျ ဆိုးကိုတော့ လောလောဆယျ အခြိနျမှာ ပြောကျသှားစမှောဖွဈလို့ အလှနျ ထိရောကျပါတယျ။
အပွငျသှားမယျ ဆိုရငျ ပနျးသီးတဈလုံး အမွဲဆောငျသှားပါ။ ပနျးသီးက ခံတှငျးအနံ့ဆိုးတှကေို အနံ့ပယျြ သှားစပေါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ပနျးသီးက သှားတှကေိုလညျး သနျ့ရှငျးစပေါတယျ။
4. သံပရိုရညျ သောကျပါ။
သံပရိုသီးက ခန်ဓါကိုယျကနျြးမာရေး အတှကျသာမက ခံတှငျးအနံ့ဆိုးတှကေိုလညျး ဖယျရှားပေးပါတယျ။ ခံတှငျးအနံ့ဆိုးစတေဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှကေို သံပရိုသီးက တိုကျခိုကျပေးနိုငျပါတယျ။ သံပရိုသီးကို ညှဈပွီး ရတေဈဖနျခှကျနဲ့ ဖြျောသောကျရုံဖွဈလို့ အလှနျလှယျကူပါတယျ။ ကွကျသှနျဖွူ၊ ကွကျသှနျနီတှေ စားပွီးတဲ့အခြိနျတှမှောလညျး သံပရိုသီးသောကျရငျ အနံ့ဆိုးတှေ မထှကျစတေော့ပါဘူး။
5. ခံတှငျးအနံ့ဆိုးတှကေို ဖယျရှားပေးတဲ့ဂယျြလျကို ဆောငျထားပါ။
ခံတှငျးအနံဆိုးတှကေို ခကျြခငျြးပြောကျဖို့ဆိုရငျ ပူရှိနျးအနံ့လိုမြိုး ပါဝငျတဲ့ ခံတှငျးနံ့ဆိုး ဖယျရှားပေးတဲ့ဂယျြလျကို ဆောငျထားပါ။ ကွှကျသားအားနညျးသူတှေ၊ ပီကမေဝါးနိုငျတဲ့ သူတှအေတှကျ ဂယျြလျလေးဆောငျထားရငျ အဆငျပွပေါတယျ။
ခံတွင်းနံ့ဆိုးတွေကို ငါးမိနစ်အတွင်း ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်း (5) ခု
ကိန်းဂဏန်းတွေအရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ 5% ကနေ 60% ဟာ အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းတွေကြောင့် ခံတွင်းနံ့ ဆိုးခြင်းကို နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ခံတွင်းကို နေ့စဉ် ဂရုစိုက်ရင်တောင်၊ ကြက်သွန်ဖြူတွေ အများကြီး မစားရင်တောင် တစ်ခါတရံမှာ ခံတွင်းက အနံ့ဆိုးနေတတ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်မှာ ပီကေမရှိတဲ့ အခါ၊ အရေးပေါ် လိုအပ်တဲ့ အခါ ခံတွင်းနံ့ ဆိုးပျောက်အောင် လုပ်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် ခံတွင်းနံ့ ဆိုးတာလဲ။
အဓိကကတော့ ခံတွင်းကို သေချာဂရုမစိုက်တဲ့ အခါ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပေါက်ဖွားလာပြီး ခံတွင်းနံ့ဆိုးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခံတွင်းနံ့ မဆိုးဖို့အတွက် ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး၊ လျှာသန့်ရှင်းရေး၊ သွားသန့်ရှင်းရေးတို့ကို အထူး ဂရုစိုက်ပြီး ပြုလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်နော်။ ခံတွင်းနံ့ ဆိုးရတဲ့အကြောင်းအရင်းအမျိုးမျိုးကတော့
1. ဆာလဖာကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အစားအစာများကို အများအပြားစားခြင်း
2. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် အရက်သောက်ခြင်း
5. စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်းနှင့် စိုးရိမ်သောကများခြင်း
6. ခံတွင်းတွင် အနာဖြစ်ခြင်း
ခံတွင်းနံ့ဆိုးတာကို ချက်ချင်းဖယ်ရှားဖို့အတွက် သွားတိုက်ဆေးတွေ၊ သွားတိုက်တံတွေ မလိုအပ်ပါဘူး။ အနံ့တွေကို ဖယ်ရှားနိုင်မယ့် ထိရောက်တဲ့ နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ခံတွင်းထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေက မကောင်းတဲ့ အနံ့တွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးပြီး တံတွေးက အနံ့ဆိုးတွေ မဖြစ်လာအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်မှာ ရေဓါတ်ပြည့်လေလေ၊ ခံတွင်းနံ့ဆိုးတာ သက်သာလေလေပါပဲ။ ခံတွင်းက ခြောက်နေတယ်ဆိုရင် ရေတစ်ဖန်ခွက်ကို သောက်လိုက်ပါ။
2. ပူဒီနာ၊ တရုတ်နံနံ၊ ပင်စိမ်းတို့လို ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေကို ဝါးစားပါ။
ပါတီရောက်နေတယ် ဆိုရင် ပူဒီနာလို ဆေးဖက်ဝင် အရွက်တွေကို ဝါးစားလိုက်ပါ။ အဲဒီလိုအရွက်တွေက သွားတွေကို ချက်ချင်း သန့်ရှင်းသွားစေမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အနံ့အသက် ဆိုးကိုတော့ လောလောဆယ် အချိန်မှာ ပျောက်သွားစေမှာဖြစ်လို့ အလွန် ထိရောက်ပါတယ်။
အပြင်သွားမယ် ဆိုရင် ပန်းသီးတစ်လုံး အမြဲဆောင်သွားပါ။ ပန်းသီးက ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတွေကို အနံ့ပျယ် သွားစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပန်းသီးက သွားတွေကိုလည်း သန့်ရှင်းစေပါတယ်။
4. သံပရိုရည် သောက်ပါ။
သံပရိုသီးက ခန္ဓါကိုယ်ကျန်းမာရေး အတွက်သာမက ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ခံတွင်းအနံ့ဆိုးစေတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို သံပရိုသီးက တိုက်ခိုက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သံပရိုသီးကို ညှစ်ပြီး ရေတစ်ဖန်ခွက်နဲ့ ဖျော်သောက်ရုံဖြစ်လို့ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီတွေ စားပြီးတဲ့အချိန်တွေမှာလည်း သံပရိုသီးသောက်ရင် အနံ့ဆိုးတွေ မထွက်စေတော့ပါဘူး။
5. ခံတွင်းအနံ့ဆိုးတွေကို ဖယ်ရှားပေးတဲ့ဂျယ်လ်ကို ဆောင်ထားပါ။
ခံတွင်းအနံဆိုးတွေကို ချက်ချင်းပျောက်ဖို့ဆိုရင် ပူရှိန်းအနံ့လိုမျိုး ပါဝင်တဲ့ ခံတွင်းနံ့ဆိုး ဖယ်ရှားပေးတဲ့ဂျယ်လ်ကို ဆောင်ထားပါ။ ကြွက်သားအားနည်းသူတွေ၊ ပီကေမဝါးနိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် ဂျယ်လ်လေးဆောင်ထားရင် အဆင်ပြေပါတယ်။